အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန်အတွက် တွင် ဗဟန်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်) - 77 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
မှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် ဝင်ပါ
MMK - က်ပ္ (သိန္း)
ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေအိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်သစ်များဈေးနှုန်းလျော့ချထားသော အိမ်များ
အသစ်ဆုံးသော စာရင်းများကို ကြည့်ပါ။Why Buy with FazWaz
ငှားရမ်းခ အားလုံးငှားရန်အတွက် တိုက်ခန်းငှားရန်အတွက် အိမ်
အသစ်ဆုံးသော စာရင်းများကို ကြည့်ပါ။သင်၏ ငှားရမ်းခကို စာရင်းတင်ပါ။
ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေ တစ်ခုကို တင်ပါ။
တွင် ဗဟန်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်) ငှားရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 77 အိမ်ခြံမြေများ
မျိုးတူစု: ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မျိုးတူစု: စာရင်းအသစ်များကို ပထမ မျိုးတူစု: အိပ်ခန်းများ မျိုးတူစု: လစဉ် ငှားရမ်းခ ( နည်းရာမှ များရာသို့) မျိုးတူစု: လစဉ် ငှားရမ်းခ ( များရာမှ နည်းရာသို့) မျိုးတူစု: With 3D Tour first မျိုးတူစု: ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ
Virtual 3D tours of ဗဟန်း အိမ်ခြံမြေများ
Turn on this filter to only view အိမ်ခြံမြေများ with 3D virtual tours!
1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yangon
ဗဟန်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
1 1 1,250 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,250 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yan...
2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Bahan, Yangon
22900 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at2Bedroom Serviced Apartment for rent in Bahan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 900 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Serviced Apartment f...
2 Bedroom Serviced Apartment for rent in Yangon
221,056 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at2Bedroom Serviced Apartment for rent in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,056 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Serviced Apartment...
221,622 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,622 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Serviced Apartment...
1 1 2,400 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,400 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yan...
4 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yangon
431,600 စတုရန်းပေ
4 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at4Bedroom Condo for rent in Bahan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,600 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
12800 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 800 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Y...
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ခြံမြေများ are listed တွင် ဗဟန်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်)
432,040 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,040 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
12900 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Y...
442,100 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
431,850 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,850 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
431,350 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,350 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
421,500 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
1 1 625 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yango...
221,050 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,050 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Serviced Apartment...
1 1 650 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 650 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yango...
3 Bedroom Apartment for rent in Bahan, Yangon
321,100 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Apartment for rent in Bahan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,100 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Apartment for rent...
421,900 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်4Bedroom Condo for rent in Ba...
1 Bedroom Serviced Apartment for rent in Green Vision Kokkine Residence, Bahan, Yangon
1 1 8,073 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at 1 Bedroom Serviced Apartment for rent in Green Vision Kokkine Residence, Bahan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 8,073 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Serviced Apartment for ren...
5 Bedroom Condo for rent in Yangon
541,972 စတုရန်းပေ
5 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at5Bedroom Condo for rent in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,972 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
543,600 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,600 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
553,000 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်5ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
543,660 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,660 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
522,000 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
563,000 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်6ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်5Bedroom Condo for rent in Ya...
4 Bedroom House for rent in Yangon
44463,451 စတုရန်းပေ
4 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 463,451 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ၁လ လျှင် 80 သိန်း အတွက် ဤအိမ် ကို ကာလရှည် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
7 Bedroom House for rent in Yangon
76926,902 စတုရန်းပေ
7 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော7အိပ်ခန်းများ နှင့်6ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 926,902 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ၁လ လျှင် 150 သိန်း အတွက် ဤအိမ် ကို ကာလရှည် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
5 Bedroom House for rent in Yangon
55521,382 စတုရန်းပေ
5 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်5ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 521,382 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ၁လ လျှင် 85 သိန်း အတွက် ဤအိမ် ကို ကာလရှည် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
8 Bedroom House for rent in Yangon
86579,314 စတုရန်းပေ
8 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 8 အိပ်ခန်းများ နှင့်6ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 579,314 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ၁လ လျှင် 90 သိန်း အတွက် ဤအိမ် ကို ကာလရှည် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
6 Bedroom House for rent in Yangon
635,400 စတုရန်းပေ
6 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော6အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 5,400 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ၁လ လျှင် 80 သိန်း အတွက် ဤအိမ် ကို ကာလရှည် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
1 - 30 ၏ 77 အဖြေများ
ဗဟန်း တွင် ထိပ်ဆုံးစီမံကိန်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ
သင့်အတွက်7အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 12 သိန်း - 51 သိန်း
သင့်အတွက်6အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 10 သိန်း - 41 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 24 သိန်း - 91 သိန်း
သင့်အတွက်2အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 47 သိန်း - 53 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 41 သိန်း - 51 သိန်း
သင့်အတွက် 1 အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 11 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 34 သိန်း
ဗဟန်း ငှးရမ်းခ ဈေးကွက် ပုံစံများ
ဗဟန်း အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် နောက်ဆုံး ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများကို ရှာပါ။
ဗဟန်း တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်နိုင်စွမ်း
ဗဟန်း တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 53 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in ဗဟန်း is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် ဗဟန်း တွင် 77 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
ဗဟန်း ပျမ်းမျှငှားရမ်းခနှုန်းထားများ , အိမ်အရွယ်အစားဖြင့်
အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ 1 အိပ်ခန်း (7 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 26 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (7 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 47 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (21 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 62 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (20 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 70 သိန်း6အိပ်ခန်းများ (6 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 79 သိန်း
ဗဟန်း တွင် စီမံကိန်းများ
7 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
6 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
2 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
1 အိမ်ခြံမြေ ရရှိနိုင်သော
ဇိမ်ခံပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ တွင် ဗဟန်း
တတ်နိုင်သေ အိမ်ခြံမြေ တွင် ဗဟန်း
ဗဟန်း တွင် အသစ်ဆုံးငှားရမ်းခများ
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ ငှားရန်အတွက်အိမ်ခြံမြေ
အိမ် For Rent Near Me
ကွန်ဒို For Rent Near Me
တိုက်ခန်း For Rent Near Me
တိုက်တန်း For Rent Near Me
အိမ်ခြံမြေ For Rent Near Me
အကာအကွယ် ဆက်သွယ်ပါ အသင်းအဖွဲ့ နှိပ်ပါ တည်နေရာမြေပုံ